Sawiro: Odowaa oo dib loogu doortay golaha shacabka - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Odowaa oo dib loogu doortay golaha shacabka
Sawiro: Odowaa oo dib loogu doortay golaha shacabka
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) ayaa markale dib loogu doortay xubnimada Golaha Shacabka Soomaaliya, kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo.
Cabdiraxmaan Odowaa oo kursiga si gaar ah loogu xiray ayaa helay 97 cod, kadib codeyn gacan taag oo loo qaaday.
Guddiga SEIT ee Galmudug oo war kasoo saaray doorashadan ayaa shaaciyey in wasiirkii hore ee arrimaha gudaha uu ku soo baxay kursiga HOP#069 ee baarlamaanka Soomaaliya.
“Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay HOP#069 ee golaha shacabka BJFS oo doorashadiisu maanta ka qabsoontay magaalada Gaalkacyo. Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa ku guuleystay 97 cod oo ah kooramka ergada fadhisay,” ayaa lagu yiri qoraalka guddiga doorashada ee HirShabelle.
Kursigan ayaa ka mid ahaa kuwa sida aadka ah isha loogu hayey, balse isbeddal ayaa ku yimid saacadihii u dmabeeyey, kadib markii uu tanaasulay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo haatan ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federalka Somalia.
Odowaa oo ka mid ahaa xubnaha mucaaradka ee ku jiray baarlamaankii hore ayaa markale ka mid noqday xildhibaanada dib loogu doortay Golaha Shacabka Soomaaliya.
Doorashadan ayaa ku soo aaday, xilli lagu sii dhowaanayo waqtiga loo qabtay in Golaha Shacabka lagu soo gabagabeeyo 15-ka bishan aynu ku jirno March ee sanadka 2022-ka.